Sida aad u soo dhowaadaan waxyaalaha heer kasta Papa ku'saabsan leedahay saamayn wayn ku Guushaada dambaysta ah ama failure. Inkastoo ujeedooyinka ee heer kasta waa cad yihiin habka ugu wanaagsan ee ku yaalla kaas oo si dhammmaantood inta badan yar oo dahsoon waxay noqon karaan. Mararka qaar waxaa jira a tilmaamo ka yar yihiin, Talooyin iyo tabaha in aad ka baran karaa laga bilaabo kuwa Adis Ababa kula dagaalameen aad ka hor inta!
Yaqaanaan marka la 'gubi’ iyo marka aad u qaboojiso sizzle in – Ololaya ku Pope yihiin weyn, waxay uga takhalusi lahaayeen karaan miro Zambiya ka sacoto in aad Papa qabow joojin, waxay ku gubi karaa iyada oo chilis, berry, degayo & karootada dheereysa oo ay lagama maarmaanka u ah crisping ilaa qeybiyo digir in faafin kuuskuus xawaaraha cagaaran yar ee aad sida ugu yihiin. Si kastaba ha ahaatee isagoo og marka si firfircoon uga raadsan biinanka dab iyo markii iyaga oo ka fogaanno si kasta waa lagama maarmaan. Heerarka qaarkood sida Level 77 ama 90.
Sidoo kale fiiri Candy ciyaarta download!
Siyaasadda Asturnaanta & Kukiyada